ITIL प्रमाणीकरण - एक पूर्ण मार्गदर्शक - आईटीटी टेक स्कूल
ITIL के हो?
ITIL प्रमाणन रेखाचित्र:
व्यापार संस्थाहरूमा लाभहरू
ITIL प्रमाणीकरण किन महत्त्वपूर्ण छ?
संगठनों मा बेहतर भूमिका को प्रोत्साहित गर्दछ:
ITIL प्रमाणित प्रोफेसरहरू पछि निर्भर छन्:
प्रशिक्षित कसरी प्राप्त गर्ने?
आईटी उद्योग एक स्थायी रूप देखि विकसित घटना हो, जसको साथ बाकी केहि अवसरों को आधार मा मौलिक छ कि एक एक्सेल को अपेक्षा गर्दछ। क्षेत्रमा उत्कृष्टको लागि एक प्रमाणित प्रशिक्षण एक मौलिक हो। आईटीआईएल एक आईटीएम को एक निश्चित पदार्थ हो जुन आईटी सेवा र आईटी प्रबंधन को क्षेत्र मा पेशेवरों को लागि महत्वपूर्ण छ। ITIL प्रमाणन प्रशिक्षणले यस विस्तृत पहिचान क्षेत्रलाई पराजित गर्न मद्दत गर्दछ जुन अनुकूल भविष्यको लागि मार्ग सफा गर्दछ।
पुनः ताजा रहन गाह्रो लाग्न सक्छ किनकि यो अपमानजनक छैन। यस उद्योगको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण भनेको हो कि क्षेत्रको व्यवसायीहरुले उद्योगलाई स्वास्थ गर्नको लागि वर्तमान बन्न आवश्यक छ। एक परिस्थितिमा जहाँ मान्यता प्राप्त प्रविधिहरू मात्र एक मात्र समयको लागि केही समयसम्म चलिरहन्छन्, जुन एक एक्सेलले लगातार परिवर्तनहरूसँग ताजा राख्ने कामलाई मात्र बनाउँछ। क्षेत्र मा भाग्य को लागि सिकन उठायो यो मास्टर गर्न को लागि प्रसिद्ध छ। ITIL प्रमाणीकरण कोर्सले मैदानमा एक पिक अप बललाई मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई समूहको अगाडि रहन मद्दत गर्दछ।
आईटीआईएल प्रशिक्षणको महत्व र प्रभावको एक वस्तुगत वस्तुले बिना शंकाको दिईएको दिईएको जानकारी तपाईंलाई यस उद्देश्यको संकेत तपाईंको उत्पादक उद्देश्यमा हुन सक्छ।
ITIL विचार आश्चर्यजनक रूपमा 1980 को माध्यम ले ग्रेट ब्रिटेनमा सिर्जना गरिएको थियो, सरकारी संस्थाहरूको लागि आईटी मद्दतको लागि अभ्यासहरूको व्यवस्था स्थापित गर्न। यसको स्थापना पछि, ITIL मापदण्ड प्राप्त भएको छ, बदलियो र विस्तारित आईटी सर्कल को सतत विकास को नवीनतम उपायहरु लाई पूरा गर्न को लागी। आईटीआईएलको आजको पूर्ण प्रणालीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आईटी सेवाहरू सबै आकारका संगठनहरूको निरीक्षण गर्दछ।
सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी को एक संक्षिप्त विवरण, आईटीआईएलले आईटी सेवाहरु को उपयोग गर्न को लागी व्यवसाय को आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी ध्यान केंद्रित गर्दछ। यो आईटीएम (आईटी सेवा व्यवस्थापन) को सन्दर्भमा विस्तृत व्याख्याको व्यवस्था हो र फारम, रणनीति, उपक्रम र चेकलिस्टहरू प्रबन्ध गर्दछ जुन तथ्याङ्क होइन-विशेष तर संगठनको सामरिक मूल्यहरू स्थापित गर्न कुनै पनि संगठनद्वारा जडान गर्न सकिन्छ। ITIL ले एक चरणलाई संगठित गर्दछ जहाँ तिनीहरू योजना, उपाय र परिवर्तन अपग्रेडलाई वास्तविक गर्न सक्छन्।
आईटीआईएललाई आईटीआईएललाई आईटी सेवाहरूको निरीक्षण गर्न संस्थाद्वारा प्रयोग गरिन्छ। यसले क्लाइन्ट वृद्धिलाई खाना बनाउने भिन्नता सेवाहरू द्वारा स्थिर साझेदारीमा मद्दत गर्दछ जसले तिनीहरूको व्यवसाय तत्वहरूसँग सम्झौता गर्ने एक ब्लुप्रिन्ट दिन्छ। आईटीआईएल हड्डीहरू इन्टरनेसन फोडेमा मद्दत पुर्याउन सक्छ जसले आईटी ढाँचा सुधार गर्न सक्छ जसले राम्रो गुणस्तरका सेवाहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
आईटीआईएलले व्यापार पदार्थले बदलिएको आर्थिक वातावरण र बजारको कङ्गनमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ जसले अझ बढी उन्नतिको लागि बाटोलाई सफा गर्दछ जसले मद्दत गर्दछ जसले राम्रो व्यवसायिक निष्पादनलाई पूरा गर्दछ। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम जस्तै विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त संस्थाहरूले आईटीआईएललाई उनीहरूको आईटी फाइदा प्रशासनमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर लाभ उठाउँछन्।
आईटीआईएलमा एक सभ्य चार्जले सम्पूर्ण कार्यकर्ताले आईटीआईएल प्रणालीको प्रयोग गर्ने नजिकैको प्रशिक्षण दिनका लागि सहयोगको लागि संगठनको लागि राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ, केहि संस्थाहरूले थप जानकारी दिन्छ। ITIL प्रमाणीकरण मोटो बिन्दुहरू।
आईटीआईएललाई पराजित गर्न पछि लागेका स्तरहरू पछि लाग्न सकिन्छ:
ITIL को फाउंडेशन स्तर - नामको प्रस्तावको रूपमा, यो ITIL प्रशिक्षणको मौलिक स्तर हो। आईटीआईएल प्रमाणीकरणको प्रमुख स्तरको रूपमा यो उम्मेदवारहरू शब्दिंगको मुख्य जानकारीको साथ प्रस्तुत गर्दछ र आईटीआईएललाई सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण संरचनाको लेआउट प्रदान गर्दछ। यसमा प्रशिक्षकहरूलाई सबै आवश्यक डेटा समावेश छ जुन आईटीको विचारमा नयाँ छन्।
ITIL प्रवचनकर्ता -2016 मा शामिल, आईटीआईएल प्रवशनकर्ता आईटीआईएल प्रमाणीकरणमा भर्खरैको अंश हो। आईटीआईएल प्रैक्टिसनरको माध्यमबाट एक उम्मेद्वारले आईटीआईएल संरचनाको प्रयोगको विस्तार गर्न स्पष्ट रूपले फिट बनायो ताकि व्यवसायको लक्ष्य बढाउन। यस स्तरले संगठनात्मक परिवर्तन व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रास्फीति र अनुमान र मापको साथ उम्मेदवारहरूलाई परिचित गराउन केंद्रित गर्दछ।
मध्यवर्ती स्तर ITIL - यस स्तरमा उम्मेद्वारहरूले आईटीआईएल प्रणालीको अनमोल मोडलहरू हेर्नका लागि तिनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकता र चासोमा निर्भर गर्ने मौका पाउँछन्। मोडलका दुई क्षेत्रहरू सेवा लाइफसेल र सेवा क्षमता व्यवस्थापन गर्छन्। अघिल्लो बेला ITIL सँग पहिचान गरिएको बिभिन्न ठूलो रकम व्यवस्थापन फारमहरू सिक्न पछि पछि विशेष प्रक्रिया जानकारी को सूक्ष्म तत्वहरू प्रदान गर्दछ।
ITIL विशेषज्ञ - पहिल्यै परिचित जानकारीमा यो स्तरले आईटीआईएल संरचना र प्रणालीको छोटो मिनेटको साथ बुझ्न प्रयोग गर्दछ।
ITIL मास्टर - यो स्तर उन विवेकहरुको लागि हो जुन व्यवस्थित र प्रबंधन क्षमताओं मा रुचि ले। आईटीआईएलको प्रशिक्षणमा अन्तिम स्तर जसले बुझाइदिन्छ यसले क्षेत्रमा निर्णय गरेको छ र उनीहरूलाई वास्तविक संरचनाको सामना गर्न निश्चित दिन्छ।
आईटीआईएल संस्थाहरू लाभदायी छन् निश्चित रूपमा यो उपभोक्ता वफादारी तिर बलियो दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ र दक्षता बढ्छ। आईटीआईएल व्यवसायिक सामग्रीले उनीहरूको अल्पविरामलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्छ र यसका परिणामहरू जुन काममा पुनरुत्थानबाट टाढा रहन्छन्। तपाईको संगठनको कमजोर क्षेत्रहरु संग आँखा को लागी आँखा को लागी, आईटीआईएल प्रमाणित मा प्रमाणित प्रोफाईल संग तपाईं उनलाई आफ्नो कौशल र कौशल को उपयोग को लागी मुफ्त विज्ञापन गर्न सक्छन्। एक पहिले देखि नै राम्रो कुरा को शीर्ष मा छ कि ITIL बेहतर र गतिशील ROI या निवेश को फिर्ता सुनिश्चित गर्दछ। फोकल प्वाइन्टहरूको यस्तो ठूलो संख्या आस्तीन माथि, संस्थाहरूले आईटीआईएल मालिकलाई सम्झौता गर्ने सम्भावनालाई कहिल्यै ग्रहण गर्न सक्दैनन्। एक संगठनमा यी उल्लेखनीय सकारात्मक प्रमाणित ITIL पेशेवरहरूको रुचि छ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसित सेट अभ्यास हुन सक्ने छ कि विभिन्न संस्थाहरूमा आईटी सेवा व्यवस्थापनमा उपयोग भइरहेको छ, ITIL प्रशिक्षण क्षेत्रमा राम्रो प्रतिस्पर्धाको लागि एक उम्मेदवारलाई चमक दिन्छ। नवाचार मा परिवर्तन को बारे मा जानना लगातार उपयोगी छ र तपाईंलाई अरु मा अधिक जमीन प्रदान गर्दछ। तपाईं मिनेट देखि परिचित हो किनकि, ITIL प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न को लागी तपाईं एक प्रभावी पेशे तरिका को लागि shortlisted को अधिक बाधाहरु छन्।
ITIL प्रमाणीकरण को रुचि को अंक
आईटीआईएल प्रमाणीकरण गर्ने आईटी प्रोफेसरहरूले आईटीआईएल संरचना प्राप्त गरेका उद्यमहरूबाट सम्मानित गरिन्छन्। एक कुरकुरा परिवर्तन, कुनै पनि मामला मा, दुवै साना र मध्यम आकारको व्यवसायहरू (एसएमएमको) को खुल्लापन र आईटीआईएल प्रमाणीकरणका साथ कामदारहरूको संगठनहरू। SMB को आज भर्चुअल बजार को अग्रिम ब्रह्मांड को कारण आईटीआईएल प्रमाणित प्रोफाईल को अनुमान पुरा तरिकाले मानिन्छ। आईटी अब व्यवसायको एक प्रसिद्ध टुक्रामा परिणत भएको छ, र एसबीएमले यसको भन्दा धेरै बढ्नका लागि SMB को प्रयास गर्दछ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ।
आईटीआईएल प्रमाणीकरण आईटीको लागि महत्त्वपूर्ण छ जुन निर्देशकहरूको अनुमान छ, जसले प्रत्येक दिन आईटी फाइदाको सामना गर्दछ। त्यसो भए, उद्यम निर्देशक को एक ठूलो भाग आईटी क्षेत्र मा अग्रिम प्रक्रिया को बारे मा जान्दछन्, लामो समय सम्म उनलाई आईटीआईएल मान्यताहरु को ध्यान दिदै। तिनीहरू ITIL मास्टर बन्नको लागि प्रगति नहुन सक्छ तर अझै पनि आईटीआईएल प्रक्रियालाई निषेध गर्न उनीहरूको आवश्यक जानकारी पनि हुन सक्छ।
लोकप्रिय हुनुको साथै प्रायः को लागी देखापर्यो पछि विशेषज्ञले आईटीआईएलको घोषणाले केहि तल पृथ्वीमा फ्याँकिन्छ।
आईटीआईएल प्रमाणीकरणले तपाईंको IT एप्रेट्रेटलाई तीव्र बनाउँछ। यो केवल तपाईंलाई परिवर्तनहरू परिवर्तनको बारेमा अवगत रहन मद्दत पुर्याउनका साथै यो आईटी पूर्वाधारको लागि स्थिर स्थापनालाई पूरा गर्दछ। आईटीआईएल संरचनाले वैकल्पिक प्रविधिहरूमा उनीहरूको उपस्थिति प्रदर्शन गरेको आईटीआईएल ढाँचाको व्यवस्था हो किनभने, समानको जानकारी अपग्रेड गर्नुपर्दछ, पेशेवरहरूले अगेडी र छिटो परिणामहरूको बाधाले सजिलै संग काम गर्दछ।
ITIL प्रमाणित उम्मेदवार एक संगठन को लागि एक ठोस फायदा हो जुन यसैले उनलाई सबै व्यवसाय प्रदर्शन मा योग्यता प्रदान गर्दछ।
प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा आईटीआईएलको कार्यान्वयन गर्ने विकास संख्याको साथ, प्रमाणीकरणले उम्मेद्वार सफा गर्छ र बजारमा सर्वश्रेष्ठ व्यवसायको प्रशंसाको लागि उनीहरूलाई कलात्मकता प्रदान गर्दछ। त्यसैगरी आईटीआईएल प्रमाणित उम्मेद्वारले संस्थाहरूमा आफ्ना भागहरू र कर्तव्यहरूको सन्दर्भमा निर्णयमा बसोबास गर्ने एक उच्च स्थान छ।
आईटीआईएलसँग आईओएस / आईसीएक्सएक्सएनएमएमएक्स मापदण्डहरूसँग जोडिएको छ त्यसकारण सुझाव दिन्छ कि निकट भविष्यमा कुनै पनि समयमा कुनै पनि स्थानमा छोड्ने छैन। यसको अतिरिक्त, 20000 भन्दा बढी संगठनहरू ISO / IEC 800 प्रमाणित भएका छन्, ITIL प्रमाणित प्रोफेसरहरूको रुचिले शिखरमा रहन्छ। तिनीहरू विषयको सम्भावित जानकारीको कारण अन्यमा एक सभ्य शट खडा गर्छन्।
एक प्रमाणित ITIL यदि आगामी भविष्यमा व्यवसाय स्तर परिवर्तन नगर्न वैश्विक स्तरमा जोखिम लिने छनौट गर्न सक्दछ भने। 10,000 संस्थाहरू भन्दा बढी विश्वव्यापी ITIL ढाँचामा प्रवेश गरेको छ, पछि पछि विदेशमा उत्पादित भविष्यका लागि सम्भावनाहरू निस्किन्छ।
आईटीआईएलमा एक प्रमाणीकरण वेतन र प्रगतिमा एसिन्टको बाधाहरू बनाउँछ। एक ITIL प्रतिभाशाली उम्मेदवार एक सामान्य वेतन मापन हुन्छ र यसका साथै अफिसमा एक प्रमुख पद छ।
औपचारिक र विस्तृत ITIL प्रशिक्षण धेरै अनलाइन पाठ्यक्रमहरू मार्फत खुला छ। अनलाईन कोर्स गाइडले अन्यथा सिक्ने र कोचलाई हटाउदियो कक्षाको कक्षा कक्षामा आईएलआईएलको जानकारी सुधार गर्न थप सहयोग। प्रमाणित संगठनों द्वारा प्रदान गरिएको आईटीआईएल प्रशिक्षणले ग्यारेन्टी गर्दछ कि जुनसुकै समानता पत्ता लगाउनका लागि उम्मेद्वारहरूले आफ्नो झुकाव र मनपर्दो बनाएको पाठ्यक्रमलाई माथि उठाउँछन्।
अधिक वा कम, एक प्रमाणित ITIL उम्मेद्वार लगातार संरचना को विस्तार को विस्तार देखि अवधारणा को अनुपस्थिति को सामना कभी नहीं सामना गर्न सक्छन्। आईटीआईएल प्रशिक्षणको विभिन्न स्तरमा प्रमाणित हुनुको कारण आईटी सर्कलमा विभिन्न प्रशासनिकमा एक विशेषज्ञलाई सहयोग पुर्याउँछ। आईटीआईएल प्रमाणित प्रत्याशितले पछाडी प्रगतिको गति र स्थिर गतिमा प्रगतिको पछाडि पुर्याउनेछ।
Oracle प्रमाणन - एक पूर्ण मार्गदर्शक
DevOps, आईटीआईएल र आगाइलको संसारलाई असर पार्दै